Ciyaartoy istaaga ka dhacay oo geeriyooday isaga oo garoonka ku jira – Hornafrik Media Network
CIYAAROSomali NewsWARARKA MAANTA
Xiriirka Kubadda Cagta ee dalka Nigeria (NFF) ayaa hakiyay tartankii ciyaaraha, iyagoo sheegay in la hubin doono adeegyada caafimaad ee dhammaan kooxaha ka tirsan horyaalka dalkaas kaddib markii uu maalintii Axadda ahayd geeriyooday ciyaartoy garoonka ku jiray.
Chineme Martins, oo 22 jir ahaa ayaa istaagga ka dhacay, xilli uu u ciyaarayay kooxdiisa Nasarawa United ee ka dhisan dalka Nigeria.
Martins ayaa mar qura miyir daboolmay, isagoo uusan ciyaartoy kale la joogin, markii ay ciyaarta mareysay qeybtii labaad.
Kooxda Nasarawa ayaa markaas la ciyaareysay kooxda kale ee lagu magacaabo Katsina United.
“Ciyaartoyga waxaa adeeg caafimaad u fidiyay dhakhaatiirta labada kooxood. Markii dambena waxaa loola cararay isbitaalka Dalhatu-Araf Specialist ee magaalada Lafia, halkaasoo ugu dambeyntii lagu shaaciyay inuu geeriyooday”, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray maamulka xirfadleyda Horyaalka Kubadda Cagta ee Nigeria.
Meydkiisa ayaa lagu sameeyay baaritaan, si loo ogaado sababta keentay dhimashadiisa.
Hase ahaatee Xiriirka Kubadda Cagta Nigeria ayaa sheegay in aan ciyaar kale la qaban doonin ilaa laga xaqiijiyo in dhammaan kooxaha ay heystaan qalab caafimaad oo dhammeystiran, sida uu qabo sharciga ciyaaraha ee dalkaas.